Honda - စလွန်းအိမ်စီးကားများအငှားပေးရန် Honda Fit Gp1 2011 အဖြူ လိုင်စင် - Myanmar Car Search Engine
ဟွန်ဒါ ကား အမြန်ရှာနည်း / Fast Search Honda
အမျိုးအစားနဲ့ ရှာနည်း။ Fit / Jazz, Civic | တက်စီ ဝယ်ချင်တာလား | ထရပ်ကား ရှာနေလား | ဘတ်စ်ကားတွေလည်း ရှိတယ်
စလွန်းအိမ်စီးကားများအငှားပေးရန် Honda Fit Gp1 2011 အဖြူ လိုင်စင် ဈေး / price4(သိန်း)ကျပ်
စလွန်းအိမ်စီးကားများအငှားပေးရန် Honda Fit Gp1 2011 အဖြူ လိုင်စင်နက် YGN 7K/ Honda Fit Gp1 2011 ငှက်ပျောညွန်. အစိမ်းနူ လိုင်စင်နက် YGN 4H/ Mitsubishi Colt Plus1.5ငွေရောင်. လိုင်စင်နက် YGN 1I/ စပေါ်၄သိန်း တစ်လ၄သိန်း P h. 0997 0222031 0997. 3929293
◄ ရှေ့သို့ ◄: Honda Fit shuttle 2012 Fog Lamp ကားအပိုပစ္စည်း ၊ Model မြင့် ကားအလှဆင်ပစ္စည်??
နောက်သို့ ►: Honda Fit Shuttle 2012 YGN လိုင်စင်,,စတိအမှတ် Navi Premium Or TV,back camera,Or Alloys,Smart Key,Sun Shade,Cool Box,F ►
Honda Fit (ဟွန်ဒါ ဖစ်)
Honda Jazz ဟုလည်း ခေါ်
တံခါး ၅ ပေါက်ပါရှိ
မျိုးဆက် ၃ ဆက်ရှိ
အင်ဂျင် ၃ စားလာ
ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံ/ နိုင်ငံ
Length 3,845 mm (151.4 in) (Worldwide)
Curb weight 1,084 kg (2,390 lb)
2013 မှာ ငါး(သန်း) ရောင်းရ